व्यापार बढाउने उपाय
एजेन्सी, चैत्र ७, २०७३
काजखस्तानको ओस्केमनस्थित एक सैलुनले ग्राहकहरू आकर्षित गर्न नयाँ उपाय अपनाएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, चैत्र ७, २०७३
योनिरस कसरी आउँछ ? योनि एक नली आकारको एकदमै तन्कन सक्ने तन्तुले बनेको अङ्ग हो । यसको भित्री तह श्लेष्मयुक्त हुन्छ । त्यसैले स्वभाविक अवस्थामा पनि यो एक किसिमले भिजेको अवस्थामै हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र ७, २०७३
केही साताअघि पोखरामा डिजाइनर उत्तम बनेपालीको सेलिब्रेटी फेसन सोमा एक जना चकलेटी अनुहार र्‍याम्पमा देखिए । उनी र्‍याम्पमा उत्रनेबित्तिकै दर्शकदीर्घाबाट लामो सास फेरेको तथा चिच्याएको महिला आवाज सुनियो । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री सन्नी लियोनलाई कस्ता पुरुष मनपर्छन् ? यो आफैंमा एउटा रोमाञ्चक जिज्ञासा हो । हालै एउटा अन्तर्वार्तामा सन्नीले महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने पुरुषले मात्र आफूलाई आकर्षित गर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
पोखरामा बढ्दैछन् संगीत सिक्नेहरु...
राजाराम पौडेल, चैत्र ७, २०७३
संगीतका लागि उर्वर भूमि मानिएको पोखरामा अहिले संगीतको औपचारिक प्रशिक्षण लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। पुरा पढ्नुहोस्
गर्मीलाई ग्ल्यामरस मौसम किन भनिएको होला ?
फेसन गर्ने युवा–युवतीका लागि गर्मीको मौसम ‘पर्फेक्ट सिजन’ हो । यसलाई त म ‘कलरफुल’ मौसम पनि मान्छु । गर्मीको फेसनले गर्दा गर्मी महिनाको वातावरण समेत सुखद भएको हुनसक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
हलिउडको टेलिभिजन सिरिज शो गेम अफ थ्रोन कसले हेर्नुभएको छ ? उक्त शोमा इर्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने अभिनेत्री नेपाली हुन् अर्घाखाँची जिल्लाको खाँचिकोट पुख्र्यौली घर भएकी कपिलवस्तुकी युवती । पुरा पढ्नुहोस्
शाहरूख खानको चलचित्र ‘अशोका’ मार्फत अभिनयमा आएकी अभिनेत्रीह र्षिताको विवाह भट्ट वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
चीनकी लिउ ताइजीले मृत्युलाई अँगाल्न चाहने र मृत्यु नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने भावना राख्नेहरूलाई लक्षित गरेर चिहान कक्षा सञ्चालनमा ल्याएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
गायक नबिन कटुवालको दोस्रो आधुनिक एल्वम ‘साथ’ भर्खरै बजारमा आएको छ । आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच एल्वम बिमोचन भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्